inqubomgomo yomshwalense wezempilo yenkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo - Gary Bailey
Tag: inqubomgomo yomshwalense wezempilo yenkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo
Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo Sandton
Umshuwalense wemoto uyinto ebaluleke kakhulu kubo bonke abanikazi bemoto, kungakhathaliseki ukuthi bangaphi. Wonke amagesi kahulumeni anezidingo zawo siqu. Kunezinye izidingo ezidingekayo abashayeli ukuze bakwazi ukuthenga umshwalense futhi bakwazi ukushayela ngaphandle kokungena enkingeni. Futhi, umshuwalense wemoto ungase ube yinto ebiza kakhulu futhi eyinkimbinkimbi. Abashayeli abaningi bazithola besebenza futhi abaziqondi izimo eziphuthumayo ezihlanganisiwe. Kubalulekile ukukhuluma nochwepheshe mayelana neminye yomshuwalense, Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo ku Sandton kodwa kukhona okuyisisekelo ukuthi wonke umuntu ofuna umshuwalense wemoto kufanele aqonde.
Ngakolunye uhlangothi, ukukhishwa imali kungukuthi uzodinga ukuzixazulula ngaphambi kokuba inkampani ithathe isimangalo. Esimweni esinjalo, Umshuwalense Wesikhathi Esifushane kunesidakamizwa kuzo zonke izenzakalo kanye nayo yonke inqubomgomo. Uma i-deductible iphakanyiswa, ama-premium ahla.
Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo ku Sandton ?
Umshuwalense wezinto zonke useduze nathi njengomhlambi wezinyosi. Kudingeka sithathe okulungile noma mhlawumbe singalunywa kakhulu. Kungakhathaliseki ukuthi yimiphi imikhiqizo oyibizayo kukhona umshuwalense. Kusuka emotweni encane eya endlini enkulu ihlanganisa yonke into. Manje esimweni esinjalo kuba okubalulekile ukulandelela abahlinzeki bomshuwalense wangempela. Sonke sivame ukuzwa ukuthi izinkampanini zomshuwalense ezihlukahlukene zinikeza abantu abanezingcaphuno zemincintiswano zomshuwalense ngokuqhathaniswa okuphelele, ngamazinga aphansi e-premium. Nakuba kungase kuzwe kulula kodwa akuyona into eqinisweni, kunezinto eziningi okufanele uzibheke ukuphepha kwakho. Ngokwesibonelo, izinkampani zomshuwalense azinikezeli inqubomgomo efanayo namakhasimende amabili ahlukene. Ngakho, abathengi kumele bahlole izinkampanini zomshuwalense wemoto nezinqubomgomo zabo zokuba nenqubomgomo engcono kakhulu yomshuwarensi etholakala khona kuwebhu. Omunye udinga ukuqhathanisa umshuwalense wemoto ngale njongo. Kuphela emva kokuhlolwa okuphelele kwezici zemibango ehlukahlukene yemoto eyodwa kufanele ihambisane phambili. Lokhu kungamvumeli ukuthi asebenze kahle, kodwa futhi kumenze aqaphele ezinye izinto ezibhekene nokubheja. Umuntu uyaqiniseka ukuthi ahlale kude nomshuwalense wemoto eshibhile uma ekwazi amadili angcono, ngemuva kokuqhathanisa konke okukhethwa kukho emakethe. Udinga nje ukuyeka isikhathi sakho sosuku nosuku ukwenza lokhu futhi ekugcineni uyenzela okuhle kuwe. Lezi zonke zicacisa ngokucacile isizathu sokuqhathanisa ukuqinisekiswa kwemoto ngaphambi kokukhetha eyodwa.
Ukwenza yonke inqubo yokuqhathanisa ukuthi udinga ukwazi ukuthi ungenza kanjani ukuqhathaniswa kwemali yokuphepha kwemoto. Okokuqala hlola ubuqiniso benkampani. Ubunikazi benkampani nokwethembeka kuboniswa isevisi yamakhasimende. Zama ukuthola ukuthi zinhle kangakanani ezindaweni zokumangala. Bheka ukuthi umshuwalense wakho uhlanganisa imoto engaphezu kweyodwa ngaphansi kwenqubomgomo eyodwa. Eziningana zalezi zinqubomgomo zinikeza amazinga aphansi e-premium ama-insured amabili anakekelwa ngaphansi kwenqubomgomo eyodwa. Qhathanisa izindleko zomshuwalense wemoto kanye nobubanzi bezinqubomgomo ezehlukene. Isibonelo, izinqubomgomo ezehlukene zinemikhakha ehlukene, njengokungena kwezokwelapha kanye nekhava eliqashisayo. Abathengi ngokuvamile bangathola izici ezithile zisuswe kuwo noma bakhethe enye inqubomgomo ngezinga eliphansi. Into elandelayo ebalulekile okudingeka ukwenze iqhathanisa ama-deductibles. Ngokusekelwe kuzidingo zakho, khetha inqubomgomo ngama-premium aphansi kanye ne-deductibles ephakeme, noma ngokuphambene nalokho. Zama ukunquma ukutholakala komshwalense wemfanelo. Buza ukuthi izinga luni lokubhalela labo abangekho abashayeli abaphephile.
Okulandelayo udinga ukwazi ukuthi kufanele uqhathanise kanjani izinkampanini zomshuwalense wemoto ezahlukene. Yenza ucwaningo oluningi ngokubaluleka kwamakethe athile kanye nokuvumelana kwezezimali. Lokhu kukuvumela ukuba ulandele abaholi bemakethe yangempela kusuka kulo lonke i-lot. Qaphela ukubuyekezwa kwabanikazi bezinqubomgomo namakhasimende ukuthola umbono omuhle mayelana nenkonzo yamakhasimende yomshuwalense. Ngokubheka wonke lawa maphuzu uzokwazi ukuthi ngabe wenze iphutha ukukhetha inkampani yakho. Konke lokhu kufaka isicelo somshuwalense wekhaya. Ngakho-ke, udinga ukuqhathanisa umshuwalense ekhaya futhi.
Imoto Yomshuwalense - Kufanele Ukwazi Amaqiniso
Ukuhlolwa kwamanani ezingozi eziboshwe kumuntu othize kusetshenziswa njengesisekelo semali ye-premium. Kubantu ababeka ingozi enkulu yokubandakanyeka engozini yezimoto, inkampani yomshuwalense kungenzeka ukuthi ichithe imali ekuphenduleni isimangalo. Ngakho-ke, laba bantu abanamalungelo omthetho ngokuvamile bakhokhela inani eliyinhloko lemali eliphansi uma kuqhathaniswa nalabo abahlolwe ukuthi basengozini ephansi.
Nakuba abantu ababili bangase babe nohlobo olufanayo lwebanga lemoto nomholo, bangase bakhokhe i-premium ehlukile yabo umshwalense wemoto. Inani lizimisele ukusebenzisa umshwalense we-umshuwalense wemoto, okuyinto ithuluzi eliyigugu lomshwalense.
Ubani obungozi obukhulu?
Umnikazi imoto ebiza futhi enamandla ikhokha imali enkulu kakhulu kunomnikazi wesimiso esincane kusukela owake wangena engozini enkulu yokuba ukwebiwa kwemoto kunezokugcina. Abanikazi bezimoto abahlala ezindaweni ezinamazinga aphezulu olwaphulwa ubugebengu nazo zitholakala ukuthi zisengozini enkulu kunalezo ezihlala ezindaweni ezithule, zokuhlala. Okwamanje, abashayeli abasha babhekwa njengengozi enkulu uma kuqhathaniswa nabashayeli bezilwane ezindala, ngakho-ke labo abaneminyaka eminingi abanokuhlangenwe nakho kokushayela bathambekele ekukhokheni amaprimiyamu athibhile.
Umdala omunye umshayeli onqunyiwe, futhi abashayeli abasha bacatshangwa ukuthi ingozi encane ngoba ayinakwenzeka ukuhileleka engozini yemoto. Ingxabano isekelwe emininingwaneni yemininingwane ebonisa ukuthi abashayeli asebekhulile abaye bavala isikhathi esiningi ngemuva kwesondo abakwazi ukubandakanyeka emikhankasweni yomgwaqo njengoba abashayeli abancane bekhona.
Umnikazi wemoto ofuna ukuvikela imoto enomgomo womshuwalense ingasebenzisa kahle imithombo ehlukahlukene ye-intanethi etholakalayo namhlanje ukuthola ukulinganiswa kwe-premium okufanele bayikhokhe.
Yiziphi izinsiza ezikhona ku-intanethi?
Ukulinganiswa komshuwalense wemoto kusekelwe kwedatha yamanje, futhi kuyithuluzi eliwusizo labanikazi bezimoto abafuna ukuthola inqubomgomo engcono kakhulu futhi abangayithola. Kukhona amawebhusayithi anokwethenjelwa anikela ngezinsizakalo zomshuwalense wezimoto online. Lezi zindawo zisekela ukulinganisa nezibalo zabo kwisofthiwe yokuqapha umshuwalense wemoto eqoqa futhi ihlaziye idatha. Ingcebo yolwazi etholakala kulezi zindawo ingasiza abantu abacabangela ukuthenga inqubomgomo yomshwalense wemoto. Isibonelo, idatha yamanje yamaphesenti ajwayelekile akhokhelwa ngamaqembu ahlukene angatholakala. Ukunikezwa umqondo wokuthi kuningi okudingayo ukukhokhela umshuwalense wemoto kunika amandla umnikazi wemoto ekwenzeni ukukhetha.
Ukuthola ukuthenga okulungile
Ukuba uhlobo olufanele lomshwalense luyisiketi sokuphepha sabanikazi bemoto. Umshwalense wemoto ophelele ungasindisa abantu imali. Lezi zinsuku, kunezinketho zenqubomgomo ezitholakalayo ukuze umnikazi wemoto athole kalula ukuthunyelwa okuhambisana nezidingo zakhe.
Author garybaileyPosted on March 8, 2019 March 8, 2019 Categories Ikhava Yomshuwalense Wasekhaya Wesikhashana PretoriaTags abahlinzeki bomshuwalense benkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, abahlinzeki bomshuwalense wezempilo wenkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, amazinga omshwalense wempilo yenkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, Classic car umshuwalense guide and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, Imibhalo yomshuwalense wasekhaya yaseNingizimu Afrika and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, imihlahlandlela yomshuwalense wemoto yakudala and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, imininingwane yomshuwalense wemoto yakudala and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, inkampani yomshuwalense wenkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, Inkampani yomshuwalense yenkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, inkampani yomshwalense wemoto yenkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, inkampani yomshwalense wezempilo yenkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, inkampani yomshwalense yenkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, inqubomgomo yomshwalense wezempilo yenkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, inqubomgomo yomshwalense yenkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, Isaphulelo somshuwalense ekhaya and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, izidingo zomshuwalense wenkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, izincomo zomshuwalense wenkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, izindleko zomshuwalense wemoto zakudala and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, izindleko zomshuwalense wenkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, izingcaphuno zemishuwalense ekhaya and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, izingcaphuno zomshuwalense ekhaya and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, izingcaphuno zomshuwalense zomzimba and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, izinhlelo zomshuwalense wamazinyo ezinkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, izinhlelo zomshuwalense wezempilo ezinkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, izinhlobo zomshuwalense ezinkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, izinkampani zomshuwalense ezinkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, izinkampani zomshuwalense wenkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, izinkampani zomshuwalense wezempilo and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, izinsizakalo zomshuwalense ezinkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, izinzuzo zomshwalense wemoto zakudala and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, okuyisisekelo somshuwalense wezimoto zakudala and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, thola i-inshuwalense yomndeni and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, uhlu lwezinkampani zakudala zomshuwalense wemoto and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, uhlu lwezinkampani zomshuwalense ezinkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, ukufaneleka komshwalense wemoto zakudala and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, ukuqhathaniswa komshuwalense ekhaya and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, umphathi womshuwalense wenkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, Umshuwalense wemoto engcono kakhulu ochwepheshe abasha and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, umshuwalense wemoto izinkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, umshuwalense wemoto ka-peter d james and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, umshuwalense wemoto ochwepheshe and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, umshuwalense wemoto ochwepheshe bezokwelapha and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, umshuwalense wemoto ochwepheshe bezomthetho and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, umshuwalense wemoto wabasebenzi abasha and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, umshuwalense wemoto webhizinisi and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, umshuwalense wemoto yezimoto zebhizinisi and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, umshuwalense wenkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, umshuwalense wenkampani kanye nobungozi and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, umshuwalense wezempilo wenkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, umshuwalense wokuthuthukisa izinkampani and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, umshwalense wemoto omdala oqinisekisiwe and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, umshwalense wemoto omdala wokulinganisa and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo, Umshwalense wemoto zakudala uchazwe and Inkokhelo Yomphakathi Kanye Nomshuwalense Wokukhokhela Inzuzo